Le yiGlass J7 Plus, i-Samsung yesibini yefowuni enekhamera ezimbini | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Le yiGalaxy J7 Plus, i-smartphone yesibini ye-Samsung enekhamera ezimbini
Njengoko sele usazi, oku kusandula ukubhengezwa Galaxy Note 8 Yifowuni yokuqala ye-Samsung eneenkqubo ezimbini zekhamera. Nangona kunjalo, inkampani ikwazisa nje iGlass J7 Plus eThailand, indawo ekumgangatho ophakathi kwindawo yayo eyona nto iphambili kuyo yikhamera yayo ezimbini.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kuye kwavela amarhe okuqala malunga neGalaxy J7 Plus, nangona iinkcukacha zayo kunye nemifanekiso ethile ziye zavezwa kwiveki ephelileyo. Isixhobo esiphakathi kwinqanaba ku inzwa ye-13-megapixel ene-f / 1.7 ukuvula kunye ne-5-megapixel sensor ene-f / 1.9 ngasemva.
Kwelinye icala, i-Galaxy J7 Plus izisa ifayile ye Ikhamera ye-selfie eyi-16 ye-megapixel ene-LED, Iscreen I-5.5 intshi ye-Super AMOLED ngesisombululo esipheleleyo se-HD kunye neglasi ye-2.5D kunye neprosesa Isibhozo esingundoqo seMediaTek Helio P20, Kunye neMali T880 GPU.
Ngokunjalo, i-Galaxy J7 Plus nayo izisa I-4GB ye-RAM kunye ne-32GB yendawo yokugcina, eyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256GB. Ngokunxibelelana, igajethi ibandakanya indawo ezimbini zeSIM, inkxaso I-4G LTE ngetekhnoloji yeVoLTEI-Bluetooth 4.2 kunye ne-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n (2.4 + 5GHz) imodyuli.
Okokugqibela, isixhobo sizisa ibhetri ye 3.000 mAh, umfundi weminwe Kwaye iqhosha lasekhaya ezantsi kwesikrini, kwaye uzisa umncedisi onyanisekileyo Bixby, ebonakala kuthotho lweGPS S8. Ikwanayo nesakhelo sealuminium, Soloko ikwimo yokubonisa, kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android 7.0 Nougat.
I-Galaxy J7 Plus ngoku iyafumaneka ukulungiselela ukubhukisha kwangaphambili Tailandia, apho ixabisa malunga 400 euro (12.900 THB) kwaye inokuthengwa ngemibala emithathu eyahlukeneyo: emnyama, igolide nepinki. Okwangoku kupheleliselwe kuloo marike, nangona kungagwetywanga ngaphandle ukuba iya kuthengiswa kwezinye iimarike. Nangona kunjalo, iSamsung ayabelananga naziphi na iinkcukacha kuluntu okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Le yiGalaxy J7 Plus, i-smartphone yesibini ye-Samsung enekhamera ezimbini
I-Instagram iphinde ibe sesichengeni kuhlaselo
Ezi zixhobo zintathu sele zixhasa umxholo we-HDR ovela kwiNetflix